के भक्तपुरमा कोरोना संक्रमित घटेकै हुन्? – Health Post Nepal
२०७७ कार्तिक १३ गते १५:५७
पछिल्लो तीन दिनयता दिनदिनै भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटिरहेको छ। सोमबारदेखि कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको हो।
कोरोना संक्रमित घटेको कारण सबैको मनमा खुसीको साथसाथै प्रश्न पनि उठेको छ। भक्तपुरमा के साच्चै घटेको हो कोरोना संक्रमितको संख्या?
महिना दिनअघि मात्र एकदिनमै दूई सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएको थियो। कात्तिक ९ गते मात्र एक सय ८० जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए।
तर, त्यसको भोलीपल्टदेखि कात्तिक १० गते त्यसको ठ्याक्कै आधिभन्दा पनि कम ६२ जना, त्यस्तै ११ गते १५ जना र १२ गते २९ जना मात्र कोरोना संक्रमित भएका थिए।
भक्तपुर जिल्ला जनस्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख कृष्णबहादुर मिजारले कोरोना परीक्षण नभएको कारणले संक्रमितको संख्या घटेको बताए।
उनले अष्टमीदेखि स्वाब परीक्षण गर्ने ल्याब बन्द भएपछि संक्रमितको संख्या घटेको जानकारी दिए। ‘स्वाब परीक्षण नै नभएपछि कसरी बढ्छन् कोरोना संक्रमित?,’ उनले भने, ‘अहिलेको संक्रमित संख्या सबै पुराना स्वाब परीक्षण गराएकाहरुको रिर्पोट हो।’
साथै अहिले पहिलाको जस्तै सबैलाई स्वाब कलेक्सन नगराइकन लक्षण भएहरुको मात्र स्वाब परीक्षण गराउने भएकोले पनि कम भएको उनी सुनाउँछन्।
‘अहिले नागरिक आफैंले पैसा तिरेर पिसिआर टेस्ट गराउनुपर्ने भएकोले पनि कम भएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रका इन्चार्ज रत्नसुन्दर लासिंवाले पिसिआर टेस्ट गराउन पैसा लाग्ने भएपछि स्वाब परीक्षण गराउनेको संख्या पनि कम भएको बताए।
यही कारण बिरामीको संख्या कम भएको उनको बुझाइ छ। ‘अहिले लक्षण भएकोले मात्र पैसा तिरेर स्वाब परीक्षण गराउने भनेपछि संक्रमित संख्या घटेको हो’, लासिंवा भन्छन्।
यसले गर्दा अहिले केही समय कम भए पनि पछि एकैचोटी भयाभह सिर्जना हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘पहिला स्वाब परीक्षण गर्दा लक्षण नभएकाहरुमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो’, उनले भने।
उनी अघि भन्छन्, ‘अब त सरकारले लक्षण भएमात्र परीक्षण गराउ भनेपछि लक्षण नभएकाहरुबाट कतिलाई कोरोना सर्ने होला? त्यो अनुमान गर्न सकिँदैन।’ साथै साधारण लक्षण जस्तै रुघाखोकी, ज्वरो आए पनि सर्वसाधारणले यतिकै निको हुन्छ भनेर घरमै बस्नसक्ने उनी सुनाउँछन्।
‘यस्ले सामान्य लक्षण भन्दै घर बस्दा पनि संक्रमितको संख्या बढ्न सक्छ। त्यसैले सकेसम्म सरकारले निःशुल्क कोरोना परीक्षण गराउन सक्यो भने, वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ र नियन्त्रण अभियानमा नयाँ रणनीति बनाउन पनि सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्।